Xanuun Baa Laga Qaadayaa Maurizio Sarri - Jamaahiirta CHELSEA Oo Niyad-jab Ka Muujiyey Shaxda Tababare Sarri Ee Kulanka Cardiff - Gool24.Net
Xanuun Baa Laga Qaadayaa Maurizio Sarri – Jamaahiirta CHELSEA Oo Niyad-jab Ka Muujiyey Shaxda Tababare Sarri Ee Kulanka Cardiff
March 31, 2019 Saed Balaleti
Jamaahiirta Kooxda kubadda cagta Chelsea ayaa guul-darro usii sheegay kooxdooda ciyaarta mar dhow bilaabmaysa ee ay iskaga hor imanayaan Cardiff City.
Cardiff City oo ku jirta khadka cas ee kooxaha dib ugu laabanaya heerka labaad ayaa waxay garoonkeeda ku martigelinaysaa Chelsea, waxaana tababare Sarri uu usoo xushay ciyaartooyo ay hoggaaminayaan Willian , Higuan iyo Pedro, taas oo macnaheedu tahay inuu maqan yahay xiddiga reer Belgim ee Eden Hazard.
Khadka dhexe ayaa waxa wada-jir uga ciyaaraya Barkley, Jorginho iyo Kovacic, waxaana ka maqan madaalaha reer France ee N’Golo Kante, halka difaacana aanu wax isbeddel ah ku imanin afarleydii Azpilicueta, Rudiger, David Luiz iyo Alonso iyadoo goolkana uu hayo Kepa.
Haddaba shaxdan ayaa waxa si adag uga falceliyey jamaahiirta Blues oo u sheegay tababaraha in aanu ahayn mid meel usii wadi karaya.
Mid ka mid ah taageereyaasha Chelsea ayaa barta Twitterka kusoo qoray: “Sarri gebi ahaanba waa guul-darraystay. Waa maxay waxa xun ee uu samaynayaa.”
Mid kale oo cadhaysan ayaa waxa uu isaguna: “Waa markii 100aad ee xili-ciyaareedkan, Sarri waa khasaare.”
Mid kale ayaa isaguna kasii daba-qaatay oo soo qoray: “Markii aan arkay shaxdaas, Sarri wuxuu doonayaa inuu iskaga tago kooxda. Hazard, Kante iyo CHO dhamaantood wuu fadhiisiyey. Willian iyo Pedro ayaa afka hore ah. Dulli ayaad tahay”
Halkan ka akhri qaar ka mid ah falcelinta jamaahiirta